Greek moussaka: cunto karis dhaqameed | Cuntooyinka Jikada
Maria vazquez | 05/09/2021 10:00 | Cunnooyinka Hilibka
Moussaka waa mid ka mid ah khasnadaha Gastronomy -ga Giriigga. Caalamku aqoonsan yahay, wuxuu u eg yahay lasagna, laakiin wuxuu ku beddelaa lakabyada baastada lakabyada ukunta. Ma heshay fursad aad ku tijaabiso? Hadda oo aad ka heli karto aubergines suuqa, waa waqtigii la samayn lahaa!
Moussaka ama Musaka ayaa kala dhex galay kuwan lakabyada ukunta la shiilay oo leh hilib wan iyo yaanyo. Cuntada waxaa lagu dhammeeyaa maraqa bechamel oo daboolaya lakabka ugu dambeeya ee hilibka oo si khafiif ah loogu dubay foornada. In kasta oo cuntooyin badan aysan ku darin, haddana markan waxaan rabay inaan ku daro lakabka baradhada roodhida oo caan ku ah buugaag badan oo wax lagu karsado oo u oggolaanaya googoyn nadiif ah Musaka.
Kuma khiyaanayn doono, samaynta Musaka ma aha arrin nus saac ah. Waxaa jira diyaargarowyo badan oo lagama maarmaan ah Si aad u dhammaystirto cuntadan iyo in kastoo ay fudud yihiin, waa inaad iyaga samaysaa! Markaa si aad uga faa'iidaysato wakhtigaaga, taladaydu waxay tahay marka aad dhigato, samee il weyn oo Moussaka ah si aad ugu raaxaysato ugu yaraan laba maalmood. Si aad u dhammaystirto liiskaaga waxaad u baahan doontaa oo kaliya a macmacaan khafiifa.
Moussaka ama Musaka waa cunto karis asal ahaan Giriig ah oo lakabyada ukunta iyo wan la shiiday la dhexdhigay. Tijaabi noocayaga!
2 aubergines dhexdhexaad ah
2 baradho, diiray oo la jarjaray nus sentimitir
450 g hilibka lo'da ama hilibka lo'da
1 basal weyn, la shiiday
1 toon ah, toon
3 yaanyo bislaaday, diiray oo la jarjarey
Galaas khamri cad
Farmaajada shiidan ee loo yaqaan 'gratin'
Wixii dhasha ah
25 g. Of bur
25 g. subagga
460 ml. caano
Iska yaree aubergines-ka xaleef nus-sintimitir ah waxaana ku dhejinaa warqad nuugaysa. Ku dar qanjaruufo cusbo ah oo u daa inay nastaan ​​si ay biyaha u saaraan.
Halka, ku shiil baradhada digsi qaboojin iyo saliid badan ilaa hindise. Markay hindiseen, waan ka soo bixinnaa, ka daadinnaa oo kaydinnaa.
Isla digsiga laakiin leh saliid aad u yar hadda shiil xaleefyada aubergine by dufcado. Markaan ka saareyno, waxaan ku ridnaa shaandho si aan u saarno saliidda xad -dhaafka ah kadibna aan meel dhigno.
Kadib, adiga oo aan beddelin digsiga shiil basasha iyo toonta, dhadhansan. Shan daqiiqo ka dib waxaan ku darnaa hilibka oo shiilnaa ilaa ay ka bilaabanto inay midabka beddesho.
Sidaas, waxaan ku darnaa timirta iyo yaanyada dabiiciga ah. Si fiican isku walaaq, dabool oo kari kari kulayl dhexdhexaad ah 20 daqiiqo si yaanyada u kala daadato hilibkuna u dhammeeyo karinta.
Kadib ku dar khamriga oo kari 15 daqiiqo si ay dareeraha xad -dhaafka ahi u uumi baxo.
Waqtigaas yar ayaan ka faaiidaysanaynaa diyaari bechamel. Si tan loo sameeyo, waxaan ku dhalaalinnaa subagga digsi waxaanna ku darnaa daqiiq aan kari doonno dhowr daqiiqo annagoo ku walaaqeyna isku dar dhowr ulood. Kadib, oo aan joojinayn garaacista, waxaan ku dari doonaa caanaha waxoogaa yar ilaa aan ka gaarno béchamel qaro weyn oo aan ku dari doono milix, basbaas iyo qanjar yar oo ah lowska.
Hadda oo aan wax walba qabanay, waa inaan kor u qaadnaa oo keliya, inta waxaan kululeyneynaa foornada illaa 170ºC.
Waxaan dufannaa caaryo ku habboon foornada iyo waxaan ku ridnaa baradhada salka. Ka dibna lakab ukun ah iyo hilib kale oo aan si fiican u qaybin doono oo xoogaa burburinno. Kadibna waxaan ku celin doonaa habka: lakabka aubergines iyo lakabka hilibka.
Dhamaad waxaan ku daboolnaa bechamel oo kula saydhaa jiiska.
Waxaan ku ridnay isha foornada ilaa 15 daqiiqo. Ka dib, waxaan kor u qaadeynaa heerkulka foornada ilaa 200º oo kari ilaa 5 daqiiqo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka Hilibka » Greek moussaka: cunto karis dhaqameed
Muffins Bocorka Guriga lagu Sameeyo